Charpsy က ငါ့အတွက်လား။
သက်တူရွယ်တူ / လမ်းညွှန်
ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ၊ သူငယ်ချင်းနှင့်/သို့မဟုတ် မိသားစု
အိမ် » အကြောင်း » စိတ်ကျန်းမာရေးပါဝင်သူ
Learn more about or change to သက်တူရွယ်တူ / လမ်းညွှန် profile type. And ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ၊ သူငယ်ချင်းနှင့်/သို့မဟုတ် မိသားစု.
ဤဆိုဒ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံ မရရှိနိုင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ မပါဝင်ပါနှင့်။ မကြာခင် ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ပယ်ရန်
အန္တရာယ်ရှိပြီး သြဇာညောင်းသည်။ အန္တရာယ်ရှိပြီး သြဇာရှိသော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။
နှောင့်ယှက်ခြင်း။ နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်ကျင့်ခြင်း အပြုအမူ
မသင့်လျော်သော ရင့်ကျက်သော သို့မဟုတ် ထိလွယ်ရှလွယ် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။
သတင်းမှား လွဲမှားသော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော အချက်အလက် ပါရှိသည်။
ပုတ်ခတ် ရိုင်းစိုင်းသော သို့မဟုတ် နှိမ့်ချသော အကြောင်းအရာများ ပါရှိသည်။
သံသယဖြစ်စရာ စပမ်း၊ အကြောင်းအရာအတု သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော malware ပါရှိသည်။
ဤအဖွဲ့ဝင်ကို သင်ပိတ်ဆို့လိုကြောင်း အတည်ပြုပါ။
ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့ဝင်၏ ပို့စ်များကို ကြည့်ပါ။
ပို့စ်များတွင် ဤအဖွဲ့ဝင်ကို ဖော်ပြပါ။
ဤအဖွဲ့ဝင်ကို အဖွဲ့များသို့ ဖိတ်ကြားပါ။
ဤအဖွဲ့ဝင်ကို ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ထည့်ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်ချိတ်ဆက်မှုများမှ ဤအဖွဲ့ဝင်ကို ဖယ်ရှားပြီး ဝဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲသူထံ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။	ကျေးဇူးပြု၍ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန် မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ခွင့်ပြုပါ။